SANNADKII 2016, UKRAINE WAXAY KORDHISAY DHOOFINTA BEERAHA EU-DA - UKRAINE
Sannadkii 2016, Ukraine waxay kordhisay dhoofinta beeraha EU-da
Sannadkii 2016, beeralayda Tansaaniya waxay iibiyeen wax soo saarka beeraha Midowga Yurub oo ah $ 4.2 bilyan, taasoo 1.6% ka badan marka la barbardhigo 2015, ayuu yiri agaasime ku-xigeenka cilmiga sayniska ee xarunta cilmiga ee Machadka Qaran ee Dhaqaalaha beeraha, oo xubin ka ah NAAS, Nikolai Pugachev. Sannadkii hore, Ukraine waxay ogaatay muhiimada ay leedahay ganacsiga is-weydaarsiga beeraha inta badan ee Spain, Poland, Netherlands, Talyaaniga, Jarmalka iyo Faransiiska. Qaybta ganacsiga ajnabiga ah ee waddanku wuxuu ka yaryahay 75% wadarta guud ee ganacsiga beeraha ee Midowga Yurub.
Sida laga soo xigtay warbixinta, sannadkii 2006, Ukraine ayaa inteeda badan dhoofisa, oo u dhiganta $ 1.3 bilyan. Gaar ahaan, dalka ayaa 6.7 milyan ton oo ah hadhuudh iyo 1.3 milyan oo ton oo siriyaal ah siiyay suuqyada EU-da. Intaa waxaa dheer, kaydka saliidda (inta badan kufsi, soybeanska iyo geedo qoraxda) waxay keeneen $ 607 milyan, saliidaha qudaarta - $ 1.2 bilyan, haraaga warshadaha cuntada iyo qashinka - $ 439 milyan.
Isla markaa, sannadka 2016, Midowga Yurub wuxuu soo saarey badeecooyin beeralay ah oo ku yaal Ukraine oo ah qiyaas ahaan 1.9 bilyan oo doolar (14.4% koror marka la barbardhigo 2015). Gaar ahaan, Ukraine ayaa soo saartay 27,000 tan oo miraha miraha ah oo qiyaas ahaan ah 106 milyan oo doollar, iyo sidoo kale saliid lagu qiyaaso 111 milyan oo doolar. Intaa ka sokow, Pugachev wuxuu xusay in Ukraine ay si buuxda u buuxsantay kootas ah dhoofinta sarreenka, galley, shaciir, dalagyo, miro, sonkor, istaarijiye, hilib iyo hilibka digaagga ee EU.